De Gea oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Los Blancos Real Madrid. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » De Gea oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Los Blancos Real Madrid.
De Gea oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Los Blancos Real Madrid.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 12:20 PM Goolhayaha kooxda Manchester United David De Gea ayaa ka dhawaajiyey inuusan war u heyn wararka la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid xagaagan.
25 Sano jirkan ayaa lala xiriirinayey kooxda ka dhisan caasimada dalka Spain tan iyo xagaagii hore, balse waxa uu fashilmay heshiiskii uu ugu wareegi lahaa Los Blancos daqiiqadihii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaaryahanda.
Maalmo kadib markii uu fashilkaas dhacay ayuu goolhayahii hore ee kooxda Atletico Madrid qalinka ugu duugay kooxda Red Devils heshiis cusub, Kooxda Real Madrid ayaase soo cusbooneysay doonitaankeeda ku aadan xidigan.
Muran badan oo ku aadan mustaqbalka De Gea ayaa dhashay kadib markii kooxda laga ceyriyey macalinka u dhashay dalka Holland Louis Van Gaal kaas oo ka dhigtay goolhaye David goolhayahiisa koowaad, balse De Gea ayaa arintaas biyo ku shubay isaga oo ka dhawaajiyey inuu jecel yahay inuu la shaqeeyo ninka reer Portugal Jose.
“Waxbo kala socda in Real Madrid ay dooneysa saxiixeyga” De Gea ayaa sidaas u sheegay Cadena Ser. “Halkan ayaan daganahay waxaa igaaga harsan qandaraaskeyga sedex sano, United waxaan ku heystaa wax badan, kama fikirayo inaan ka tago dhawaan”. De Gea ayaa sidaas hadalkiisa sii raaciyey.
“Koox jaceyl fara badan ii muujisa ayaan la joogaa, aad ayaan ugu mahad celinayaa Man United waan ku faraxsanahay la joogista koox sida United o okale ah” ayuu hadalkiisa kusoo afmeeray Dave Save ninka lagu naaneeso.